Madaxweynaha Filibiin oo ku hanjabay in uu diyaarad ka soo ridayo qofkii xatooyo lagu helo! | kowtharmedia.com
Home WARAR Madaxweynaha Filibiin oo ku hanjabay in uu diyaarad ka soo ridayo qofkii xatooyo lagu helo!
Madaxweynaha Filibiin oo ku hanjabay in uu diyaarad ka soo ridayo qofkii xatooyo lagu helo!
Dec 29, 2016WARAR
Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte ayaa sheegay in uu diyaarad nooca helikabtarka loo yaqaan uu ka soo tuurayo qofkii ku noqda tuug, waxana uu ku hanjabay inuu sidaa oo kale yeeli doono qofkii isku dayda inuu xado gargaarka la geynayo gobolada ay duufaan ku dhufatay dalka Filibiin,
Warkan ayuu Madaxweyne Duterte oo 71 jir ah ka sheegay mid ka mid ah degmooyinka ay duufaantu ku dhufatay ee dalka Filibiin Camarines Sur.
Tan iyo markuu xukunka la wareegay Duterte lix bilood kahor ayaa waxaa lagu diley dalka Filibiin dad gaaraya lix kun oo ruux kuwaasoo ay badankood dileen booliska ka hortaga muqaadaraadka, balse tiro ka mid ah dadkaas la diley ayaan la ogeyn cida dishay wallow uu asaga sheegay doroogiista yaalka maxkama la´aan in uu dilaaya.
Duterte oo guddoomiye ka soo noqday magaalada Davao ayaa sheegay markii uu xukunka la wareegayay in muddo lix bilood ah ku soo afjari doono la dagaalanka muqaadaraadka daroogada loo yaqaan oo si weyn loogaga isticmaalo loogagana ganacsado dalka Filibiin.
Madaxweynaha dalka Filibiin ayaa la sheegayaa in uu doonayo in uu ula dhaqamo guud ahaan shacabka ku nool dalkiisa oo tiradooda lagu sheegay 101 malyan oo ruux sidii uu ula dhaqmayay magaalada Davao oo ay ku noolaayeen dad gaaraya 1.6 malyan oo ruux.
Ururada u dooda xuquuqd ayaa diiwaan geliyay dad gaaraya 1,400 oo ruux oo lagu diley magaalada uu guddoomiyaha ka ahaa intii u dhexeysay 1998-2015.
Previous PostDAAWO: Barnaamijka Dood wadaag oo waxba aan la isku Reeban, TARSAN iyo Prof: Dalxa oo ka qayb galay! Next PostFarmaajo oo la kulmay Xildhibaanada labada Aqal ee matalaaya Jubbaland!